छायांकनमा ‘कस्मिक लभ’ | Celebrity Nepal
मुभी मेकर्सको ब्यानरमा बन्दै गरेको चलचित्र ‘कस्मिक लभ’ को छायांकन धमाधम भइरहेको छ । निर्माण टीमले केहि समय अघि मात्रै काठमाण्डौमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रको आधिकारिक घोषणा सहित शुभसाइत गरेको थियो ।
चलचित्र ‘कस्मिक लभ’छ को गत असार ११ बाट छायांकन शुरु गरिएको हो। अहिले चलचित्रको ललितपुर स्थीत बज्रबाराहीमा शुटिङ भइरहेको छ। यसै बीच निर्माण टीमले शुटीङ सेटका केहि तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेको छ।
रोमान्टिक कमेडी जनरामा निर्माण भइरहेको चलचित्रमा,सस्पेन्स पनि रहेको छ। ’कस्मिक लभ’ मा जय गौतमको लगानी रहेको छ,भने कार्यकारी निर्माताका रुपमा डि.एन. दाहाल रहेका छन्। साथै बि.एस बलामी तथा एस. अधिकारी निर्देशक रहेका छन्।
सुरज प्रधानको प्रस्तुती रहेको चलचित्रमा अर्पण थापा, प्रशान्त ताम्राकार,रबिन तामाङ तथा नायिका दिया मास्केलाई एकै साथ देख्न सकिने छ । यसका साथै नव नायक तथा नायिकाको रुपमा रिजन थापा तथा पुजन थापाले यसै चलचित्रबाट डेब्यु गर्दैछन्।
‘कस्मिक लभ’मा सुरेश बज्राचार्यको छायांकन,शेखर ज्ञवालीको लेखन,तथा बाबुल गिरीको संगीत रहेको छ । कबिरराज गहतराज तथा रामजी लामिछानेले कोरियोग्राफी गर्नेछन्।
आँचल मिलाईदिन्छु भन्दै निवेदन लेखेर पैसा असुले (भिडियो)